Met Gala 2021 Theme ကဘာလဲ။ - စတိုင်လ်
Met Gala 2021 Theme ကဘာလဲ။
Spoiler: အနီရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်အပြာရောင်တို့ကိုစဉ်းစားပါ။
Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Benefit (aka the gala 2021) ကိုတနင်္လာနေ့၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ vogue.com မရ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်ဝါသနာရှင်များသည်ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်၊ In America: A Lexicon of Fashion - ဘာသာပြန်၊ အမေရိကန်ဖက်ရှင်ကျမ်းပွဲကျင်းပခြင်း၊ ဒါကြောင့်ဒီမှာနောက်ခံအမြန်ပါ။
ဒီနှစ် Met gala ဆိုတာ USA မှာပြုလုပ်တဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာပါ၊ အမေရိကန်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုအထူးသဖြင့်ငါအထင်ကြီးလေးစားခဲ့တယ်၊ အထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်မှုနဲ့ကျားမအရည်အချင်းပြဿနာတွေရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာငါသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုအရမ်းတွေ့တာပဲ။ Costume Institute ၏တာဝန်ခံ Wendy Yu Curator Andrew Bolton သည်အလွန်မိမိကိုယ်ကိုထင်ဟပ်သည်။ ပြောပြသည် Vogue မရ။ အမေရိကန်ဖက်ရှင်ကခေတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတာငါတကယ်ယုံတယ်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်ဒီဇိုင်နာများသည်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ပါဝင်နိုင်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဥရောပဒီဇိုင်နာများ မှလွဲ၍ အခြားဥရောပဒီဇိုင်းပညာရှင်များထက်ပိုသာသည်။
Met Gala 2021 အတွက် cochairs တွေကဘယ်သူတွေလဲ။
အဘို့ Vogue ရ၊ Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman နှင့် Naomi Osaka တို့သည်ပွဲအတွက် cochairs များဖြစ်သည်။ Tom Ford၊ Instagram ၏ Adam Mosseri နှင့် Anna Wintour တို့သည်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဌများဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်။ လက်ရှိတွင်တက်ရောက်သူအားလုံးသည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝအထောက်အထားကိုပေးရမည်ဖြစ်ပြီးအစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်း မှလွဲ၍ အပြင်၌နှာခေါင်းစည်းများတပ်ထားရန်မျှော်လင့်ကြောင်း Met မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုခဲ့သည်။ လူများထံသို့ မရ။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုအပ်သလို update ပေးပါမယ်။
အမေရိကားမှာဘယ်လိုနေလဲ။ ဖက်ရှင်အဘိဓာန်ကအတိတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ် ဂါလံနဲ့တွေ့တယ် အပြင်အဆင်?
ယခင် Met gala အပြင်အဆင်အားလုံးတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားချက်များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ဥပမာ Met gala 2019 ဆောင်ပုဒ်သည် Camp: Notes on Fashion ဖြစ်သည်။ Met gala 2018 ဆောင်ပုဒ်သည် Heavenly Bodies: ဖက်ရှင်နှင့်ကက်သလစ်စိတ်ကူးယဉ်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်နည်းပညာနှင့်ဖက်ရှင်အကြောင်းအားလုံးဖြစ်သည်။ Themes တွေက gamut ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင်စခန်းဆောင်ပုဒ်သည်ငါ့အတွက်အမြဲအမြင့်မြတ်ဆုံးအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ (တောင်းပန်ပါတယ် - Gaga stan ဒီမှာ!)
ကျစ်ထားသောအစွန်းနှစ်ဖက်နှင့်ကျစ်ဆံမြီး ၂ ချောင်း